Pakistàna : vehivavy mikarakara hetsika nasiônaly ho setrin’ilay fanolànana nahavaky fo · Global Voices teny Malagasy
Naneho hevitra momba ny fanantonana imasombahoaka koa ireo mpanao fihetsiketsehana
Voadika ny 11 Desambra 2020 2:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, Français, Deutsch, English
Diabe Aurat Azadi (fanafahana ny vehivavy) teo amin'ny fiolahana iray ao Lahore Liberty, ny 12 Septambra 2020. Tsonga avy amin'ny lahatsary YouTube an'i Ilme Alim. Fandikàna: Nahoana ireo vehivavy liberaly no manohitra ilay sazy faratampony?
Ny 12 Septambra, nanao hetsipanoherana faobe ireo vehivavy pakistaney tany amin'ireo tanàandehibe tao amin'ny firenena mba hahazoana ny rariny sy hitakiana mba handray ny valinasany ireo nanao herisetra ara-nofo, taorian'ny nitantarana be tamin'ny media ny fanolanana iray nitranga tao amin'ny faritr'i Lahore.
Ny alin'ny 9 Septambra, teny amin'ny lalambe Lahore-Sialkt, raha sendra lany solika teny am-pamiliana fiara ity vehivavy iray niaraka tamin'ny zanany telo, avy ao Lahore ho any Gujranwala (97 km), no niharan'ny fandrobana sy fanolanana rehefa voaamban'ny lehilahy telo tamin'ny basy.
Araka ny nambaran'ny pôlisy ao Pendjab, ilay lalambe migodana, izay vao haingana no nisokafany, dia tsy misy andiana mpitandro filaminana manao fisafoana.
Tezitra mafy tokoa ireo media sôsialy rehefa avy nandre nandritra ny antsafa iray tao amin'ny fahitalavitra ilay manampahefana ao amin'ny pôlisin'ny renivohitra Lahore (Capital City Police Officer, CCPO), Umar Sheikh, nanome tsiny ny niharamboina noho izy namily fiara amin'ny andro alina.
Fotoana fohy taorian'izay, niparitaka nameno ny Twitter ny tenifototra iray mitaky ny hametrahan'i Umar Sheikh ny fialàny.
Nomelohin'i Shireen Mazari, minisitra federaly misahana ny zon'olombelona ao Pakistàna, ilay fanambaràna nataon'ny CCPO :
Tena tsy azo ekena raha manampahefana no hanatsiny, raha izay no azo ilazàna azy, vehivavy iray noho izy niharan'ny fanolanana tambabe, amin'ny fitenenana hoe tokony ho ny lalambe GT (Grand Trunk Road) no noraisiny, na mametraka fanontaniana momba izay antony nivoahany tamin'ny alina niaraka tamin'ireo zanany, ary dia raisiko an-tànana ity raharaha ity. Tsy misy mihitsy afaka entina manamarina ny heloke bevava momba ny fanolanana. Izay no izy.
Nanakiana ireo voalazan'ny CCPO ihany koa i Khadija Siddiqui, vehivavy mpisolovava, efa niharan'ny herisetra henjana nataon'ny tovolahy iray niray kilasy taminy teny an-dàlana iray tao Lahore tamin'ny May 2016 :
Lazain'ny CCPO fa ao anatin'ny fiarahamonintsika, tsy manana alàlana hivoaka aorian'ny 12:30 mn alina ny vehivavy sy ny ankizy! Fa iza ianareo no hametraka fetram-potoana ho anay! Antoandro be nanahary izao aza aho no voatsindrona antsy in-23 ! Aza miteny aminay hoe mifandray mivantana amin'ny fitrangan'ny loza ny “fotoana”!
[fanolorana fohy ny lahatsary]
Hita ao anatiny i Umar Sheikh, manampahefana avy ao amin'ny pôlisin'ny renivohitra Lahore, manazava ny mety ho antony nahatonga ny fitrangan'ilay fanolanana teny amin'ny lalambe. Amin'ny fiteny Urdu izy no manazava izany nandritra ny antsafa iray ho an'ny mpanao gazety. Somary efa nahazo taona, manao solomaso ary misy volombava, mitafy ny fanamiana maha-pôlisy azy.
Sorabaventy iray goavana avy amin'ireo famoriambahoaka natao tamin'ny 12 Septambra ny hoe « Mera Jism Meri Marzi » (« Ny vatako, ny safidiko »).
Ireo Aurat March (Diaben'ny Vehivavy), izay nandray anjara tamin'ny fanetsehana tany amin'ireo tanàna samihafa, dia namoaka satam-pitakiana iray, tafiditra anatin'izany ny fanoherana ny fanantonana sy ny fanohanana ireo fanavaozana ara-pitsaràna sy eny anivon'ny pôlisy mba hiantohana ny « tsy hahatohina ny vatanay ary mba hanefa noho ny zavabitany ireo mpanao herisetra».
Ny satam-pitakianay tafiditra amin'ny hetsipanoherana atao androany, ao amin'ny fiolahana ao Lahore Liberty, amin'ny 5 ora hariva.
Toherinay ny fanantonana imasombahoaka ary mangataka izahay ny hitondràna fanavaozana goavana ho entina miantoka fa tsy ho voatohintohina ny vatanay, ary ny hanerena ireo nanao herisetra hizaka ny vokatry ny nataony.
— ⁧عورت مارچ لاہور⁩ – Aurat March Lahore (@AuratMarch) 12 Septambra 2020
Izahay, amin'ny maha-mpikarakara ny hetsika, natao hiseho masoandro noho io fanafihana sahisahy teny amin'ny lalambe io, dia mitaky ny hivoahan'ny rariny haingana ho an'ireo rehetra niharan'ny herisetra ara-nofo SAINGY toherinay ny sazy faratampony sy ny herisetra hiteraka herisetra. Indro ny lisitr'ireo fitakianay.
— Aurat Azadi March Islamabad (@AuratAzadiMarch) 11 Septambra 2020
Fitakiana miisa folo no hita ao anatin'ny sary, voasoratra amin'ny fiteny anglisy.
Takianay, mpikarakara ny hetsipanoherana Mera Jism Meri Marzi tao Karachi, ny hivoahan'ny rariny, ny fandraisana andraikitra [avy amin”ireo olona voakasik'izany] , ny hitsaharan'ny herisetra sy ny [hametrahana amin'ny toerany] fanavaozana ara-drafitra. Takianay ny hitondrana fanavaozana hatrany ifotony any anatin'ireo andrimpanjakana eto amintsika mba hitsaharan'ny kolontsain'ny herisetra sy ny fanjakan-dehilahy.
— Aurat March – عورت مارچ (@AuratMarchKHI) 12 Septambra 2020
Asehon'ny sary ireo fitakiana ao anatin'ilay sata, manindry mafy ny fandàvana ny fanantonana imasombahoaka sy ny fanamelohana ho faty. Voasoratra amin'ny teny anglisy eo ambony lafika loko mavo.
Tao Pendjab monja, tamin'ny 2019, 3 881 ny tranga fanolanana ary 1 359 ny tranga fanararaotana ara-nofo voarakitra natao taminà ankizy. Araka ireo antontanisa avy amin'ny pôlisy ao Pendjab, 2 043 ireo tranga fanolanana voapetraka nandritra ny tapany voalohany ho an'ny taona 2020.
Ilay herisetra nitranga teny amin'ny lalambe migodàna no anohizan'ny pôlisy ny fanadihadiany. Na nisy aza ireo olona noahiahiana, tsy mbola nisy hatreto ny fisamborana.
Vakio koa : Bangladesh, Pakistàna ary Amazonia, ventesin'ireo vehivavy indizeny ilay hira “Misy mpanolana eo amin'ny làlanao” [mg]
Adihevitra ataon'ny media sôsialy momba ny fanamelohana ho faty
Ao Pakistàna, isaky ny lasa lohateny vaventy eny anaty gazety ny trangam-panolanana iray, takian'ny olona hatrany ny hampiharana ny fanamelohana ho faty ho an'ireo lehilahy voaheloka ho nanolana. Tsy mbola misy hafa amin'izany ny toedraharaha amin'izao fotoana izao, ary lasa tsy azo ihodivirana ety anaty media sôsialy ny tenifototra #HangRapistsPublically (Ahantony ho hitan'ny rehetra ireo mpanolana).
Ny rantsana vehivavy ao anatin'ny Jamat-e-Islami [fr], antoko pôlitika iray miankina amin'ny finoana izay nikarakara koa hetsipanoherana ho setrin'ilay tranga teny amin'ny lalambe migodàna, dia isan'ireo kaonty nandefa bitsika nampiasàna io tenifototra io.
Niteny tao amin'ny Khi Press Club androany ny sekretera jeneralin'ny rantsana vehivavy ao amin'ny Jamat-e-Islami, Rtoa Durdana Siddiqui, nandritra ilay hetsipanoherana. Notakiany ny hiarovana ny vehivavy sy ny hanantonana ho hitan'ny rehetra ireo mpanolana.
— Jamaat e Islami Karachi (Official) (@KarachiJamaat) 11 Septambra 2020
Voamarika eto ireo vehivavy vitsivitsy misarona voaly manontolo. Vehivavy roa no miatrika ny fakantsary. Ny voalohany miteny amin'ny mikrô. Lehilahy ilay mpanao gazety manontany raha ny tànany no jerena, tsy hita eo amin'ny fakantsary ny endriny. Ny vehivavy faharoa milanja soratra eny an-tànany, misy fikatiana iray amin'ny fiteny anglisy nadika hoe : « Arovy ny Vehivavy sy ny Ankizy ». Eo ambany no ahitàna filazàna ny fanondroana fa avy amin'ny rantsana vehivavy ao amin'ilay antoko ara-pinoana Jamat-e-Islami ry zareo.
Tao anaty antsafa iray dia niaro ny tokony hampiharana ilay fanantonana koa ny praiminisitra pakistaney, Imran Khan. « Tokony handray sazy ho ohatra ry zareo [mpanolana]. Raha ny hevitro manokana, tokony hahantona eny amin'ny chowk [sampanan-dàlana] izy ireny », hoy i Imran Khan.
Nanohana ny fomba fijerin'ny praiminisitra ihany koa ny governemanta federaly ao Pakistàna, no sady nankasitraka ny hanaovana ilay « famosirana amin'ny fomba simika » ho toy ny sazy entina hiarovana ny firenena amin'ny mety ho kiana ataon'ny Tandrefana.
Izaho manokana dia mihevitra fa tokony hahantona imasombahoaka ireo mpametaveta zaza sy mpanolana, saingy tsy maintsy hiatrika tamberina avy amin'ny sehatra iraisampirenena isika. Mety ho voatohintohin'io fanantonana imasombahoaka io ny sata SPG an'ny Firaisambe Eorôpeàna momba ny fifanakalozana ara-barotra ifanaovana amin'i Pakistàna. Heveriko araka izany fa ny famosirana amin'ny fomba simika no tsy maintsy raisina hampiharina amin'ireny mpanao heloka bevava ireny.
— PTI (@PTIofficial) 14 Septambra 2020
Kanefa, lavin'ny sasany ny sazy famaizana tahàka izany. Hoy i Mehreen Zahra Malik, mpanao gazety :
Araka ny voalazan'ny Generalized System of Preferences (SPG-plus) avy amin'ny Fiombonambe Eorôpeàna, nomena an'i Pakistàna tamin'ny 2014, dia fepetra iray tsy iadian-kevitra ny fanajàna ireo fifanarahana iraisampirenena, toy ny zon'olombelona. Aza mieritreritra hoe ho faly amin'ilay famosirana amin'ny fomba simika ry zareo, sy ireo famonoana imasombahoaka. #raharahaAnDalambe #TrangaAnDalambe
— Mehreen Zahra-Malik (@mehreenzahra) 14 Septambra 2020
Reema Omer, mpanolotsaina amin'ny resaka raharaham-pitsarana ao amin'ny Kaomisiôna Erantanin'ireo Mpahay Lalàna, nilaza hoe :
Ankoatry ny fanantonana imasombahoaka, nanosika ny hevitra hampiharana ny “famosirana amin'ny fomba simika” an'ireo mpanolana ihany koa ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka.
Efa nisy tolokevitra nitovitovy tamin'io natao tany amin'ny Kaomity J. Verma (J. Verma Committee, najoro hanavaozana ny lalàna taorian'ilay fanolanana tambabe tao Delhi) tao India.
Noho pic.twitter.com/IfD09BYqeV, nolavin'ilay Kaomity ilay izy.
— Reema Omer (@reema_omer) 14 Septambra 2020
Nibitsika ilay mpanao gazety, Zarrar Khuhro, hoe :
Fanavaozana ara-drafitra no tsy maintsy resahana. Manaraka ho azy avy eo ny famosirana amin'ny fomba simika, ny fanantonana imasombahoaka, ny fandevonana anaty asidra. Noho ny fanasarotan-javatra rehefa tonga eny amin'ny pôlisy, ny olana avy amin'ny lalàna sy ny fiarahamonina, dia tsy aharaisana tatitra ny ankamaroan'ireo tranga fanolanana. Ary afaka ny 96% amin'ireo izay tonga eny amin'ny tribonaly.
— Zarrar Khuhro (@ZarrarKhuhro) 14 Septambra 2020